सरकारलाई डाक्टरको खडेरी Bizshala -
काठमाण्डौ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा दुर्गमका रिक्त पदमा कर्मचारी जान छाडेका छन्। दुर्गममा गएर सेवा गर्नुपर्ने भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले आहृवान गरेको रिक्त पदमा न्यून चिकित्सकले मात्र दर्खास्त दिएका छन्।
नवौं तहको विशेषज्ञ चिकित्सकले सुख्खा तलबमा मात्रै दुर्गममा जान नमानेको स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले बताएका छन् । ‘सुख्खा तलबमा जान मान्दैनन्, अरु दिने आधार छैन । मन्त्री थापाले भने, ‘अब दुर्गममा घुम्ती चिकित्सक परिचालन गर्नुको विकल्प छैन ।’ यो खबर आजको नयाँपत्रिकामा छापिएको छ ।
बाथरोग दिवसमा नर्भिकको प्रभातफेरि
काठमाण्डौ । नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटलले यस वर्षको विश्व बाथरोग...
दशैंमा रातो मासु खानुहुँदैछ ? तपाईलाई लाग्नसक्छ यी ५ गम्भीर
अल्जाइमर्स रोगको खतरा वैज्ञानिकहरुका अनुसार रातो मासुबाट प्राप्त...
मुटुदिवसको १३ दिनअघि नै नर्भिकको विविध कार्यक्रम
काठमाण्डौ । नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटलले विविध कार्यक्रमका साथ यस...
नाबालिका मृत्युप्रति नर्भिकको प्रष्टीकरण–‘अस्पतालको
काठमाण्डौ । गत भदौ १३ गते मंगलबारका दिन नर्भिकको आकस्मिक कक्षमा...
बालबालिकाका लागि इन्टरनेट : अस्वस्थकर तयारी खानाजस्तै !
बालबालिका मामिलासम्बन्धी एकजना ब्रिटिश आयुक्तले अभिभावकहरुले...
सुनको सक्ष्म कणमा क्यान्सर निको पार्ने शक्ति !
स्कटल्याण्डमा गरिएको एउटा अनुसन्धानले सुनका सूक्ष्म कणको...
ब्लड सुगर घटाउने १० उपाय
१. नियमित व्यायाम नियमित व्यायामले तौल घटाउन सहयोग गर्नुका साथै...